8Yar (အိပ်ယာ): August 2011
Posted by 8Yar at 12:43 am9comments
ဒီနေ့ဘလော့တွေလိုက်လည်တော့ သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့ ကန်ဒီ နဲ့ သမီးစံ တို့ဆီမှာ Blog Day အတွက် Post တင်ထားတာဖတ်ရပါတယ်။ ကန်ဒီ ကကျွန်တော့ကို Tag ပြီး၊ သမီးစံ ကတော့ ကျွန်တော်တင်ထားပြီးသားမို့မ Tag တော့ပါဘူးလို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော့ ဘလော့မောင်နှမတွေနဲ့ ကျွန်တော်ကို Tag ထားတဲ့ ဘလော့ကာ အစ်ကို၊ အစ်မတွေ အားလုံးကိုလေးစာတာကြောင့် ဘလော့ဒေး အတွက် ကဗျာတိုလေး ကြိုးစားရေးပြီး တင်လိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
ငါတို့ ဘလော့ကာတွေရဲ့ တည်နေရာ....။ ။
Posted by 8Yar at 11:57 pm 15 comments
Posted by 8Yar at 8:31 am 12 comments
Posted by 8Yar at 1:14 am 18 comments
Posted by 8Yar at 10:00 pm 12 comments
ကျွန်တော်က 8Yar ပါခင်ဗျာ။ အင်မတန် ကျယ်ဝန်းလှတဲ့ ဘလော့လောကထဲကို မျက်စိသူငယ်၊ နားသူငယ်နဲ့ ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ နောင်တော်၊ အစ်မတော်များကိုလည်း ဤနေရာမှ ဂါဝရပြုလိုက်ပါသည်။
ကျယ်ပြောတဲ့ ဘလော့ လောကထဲ့ ခြေချလိုက်တယ် ဆိုရင်ပဲ၊ လတ်ဆတ်သင်းပျံ့တဲ့ လေထုနဲ့အတူ မျက်စိတစ်ဆုံးမြင်ရတဲ့ရောင်စုံ ဘလော့ ရှူခင်းကို ကြည့်ရင်း အံ့ဩ ဘနန်း ဖြစ်ရပါတယ်။ အချို့က ကဗျာတွေနဲ့ကျေနပ်၊ တစ်ချို့က ဒဏ်ရာတွေနဲ့နေတတ်ခဲ့ပြီး၊ တစ်ချို့ကတော့ နည်းပညာတွေပေး၊ အချို့က အတွေ့အကြုံတွေဖလှယ်၊ များပြားလှတဲ့ လူတွေ လက်ချင်းဆက်၊ ကျောချင်းကပ်၊ ရင်ချင်းဆက် အဲလေ! ရင်ချင်းအပ် (ရေးရင်းရေးရင်းနဲ့ စိတ်ကဖောက်ချင်လာတယ်။ ဟီး။) ဆိုချင်တာက သီချင်း ဟုတ်ပေါင်! ဆိုလိုချင်တာက အရာရာကိုအတူရင်ဆိုင်၊ ပြဿနာတွေကို လက်တွဲရှာ (တိန်! မှားပြန်ပြီ) ပြဿနာတွေကို လက်တွဲဖြေရှင်း (များများရေးရင် မှားတာနဲ့ ချောင်းရိုက်ခံရတော့မှာပဲ၊ တိုတိုပဲရေးတော့မယ် ဟီး... :P) လောကကို အကျိုးပြုသူတွေ အများအပြားတို့ကို ကျွန်တော် 8Yar မှ လေးစားစွာနှုတ်ခွန်းဆက်ရင်း မြန်မာဘလော့ လောကထဲကို ဝင်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။
ဘလော့ ဖွင့်ပွဲ အထိန်းအမှတ် အနေဖြင့် Google မှမှာယူထားသော မွေးနေ့ကိတ်များဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံလိုက်ပါသည်။
ဒါက ဘလော့ကာ အစ်ကိုကြီး၊ အစ်မကြီးများ အတွက်
ဒါက ဘလော့ကာ ညီလေး၊ ညီမလေးများ အတွက်
ဒါက ကဗျာဆန်သောသူများ အတွက်
ဒါက ဘောလုံးချစ်သော ကိုကို၊ မမများ အတွက်
ဒါက ပုလင်းကြိုက်သော ကိုကို၊ မမများ အတွက်
Posted by 8Yar at 12:23 am9comments